Kaabta Samsung in Cloud si Hayso Xogta Your Meel
Cloud oo xasilisay adeegga gurmad online oo ka ilaaliya macluumaadka qiimaha badan ee kala duwan off-site goobaha server taas oo macnaheedu yahay macluumaadka la ilaaliyo xataa hadii aad telefoonka waxaa burburay ama xogta laga badiyay cajaladaha deegaanka sababo kasta. Haddii aad leedahay telefoonka Samsung ama kiniin ah, laga yaabo in aad rabto in aad gurmad oo dhan xogta mobile muhiim ah in daruurtii. Si kastaba ha ahaatee, ma waxaad qabto wax fikrad ah oo ku saabsan sida loo raad raac Samsung in daruur? In ay qayb ka socda, waxaan diiradda saaraan kuu sheegaya sida loo Mudanayaasha account ah Samsung iyo gurmad xogta in ay isticmaalaan iyo qaar ka mid ah barnaamijyadooda Android inay sameeyaan Samsung daruur gurmad.
Qaybta 1. Sida loo dib Samsung Data leh Samsung Account Qaybta 2. Top 5 Android Apps in kaabta Samsung Galaxy S4 / S3 / S2 in Cloud
Qaybta 1. Sida loo dib Samsung Data la Account ah Samsung
Account Samsung waa adeeg dhisay-in aad telefoon Samsung. Waxay kaa caawinaysaa inaad Guda gurmad, SMS, MMS, iyo goobaha ka phone Samsung in server Samsung ah. Haddii aad u isticmaashay xisaabta Gmail, waa in aad taqaan sida loo isticmaalo xisaabta Samsung. Waa mid aad u fudud.
Sida loo dhigay Samsung Account ah?
Tallaabada 1. aad Samsung telefoonka, tuubada Settings . Hoos shaashadda ilaa heli Xisaabaadka iyo nidaameed . Waxaa Tubada. On ay screen, ka jaftaa dar xisaabta .
Tallaabada 2. Tubada account Samsung . Markaas, abuuraan xisaab. Ku qor email, sirta ah iyo kuwa kale.
Tallaabada 3. Kadib markii shubo xisaabta Samsung, ka jaftaa aad Samsung account > Device gurmad . Dooro fursadaha kaabta .
Tallaabada 4. A hadal yar oo booda. Sax xogta Samsung aad rabto in aad gurmad. Dhab ahaantii, aad awoodo Guda gurmad, SMS, MMS, iyo goobaha. Markaas, ka jaftaa OK .
Tallaabada 5. Markaas, ka jaftaa Back ilaa hadda in ay dib u kor xogta aad doonayay in daruur Samsung. Ama waxaad sax karaa Auto gurmad in aynu xog gurmad phone Samsung maalintii si toos ah hal mar.
Ka sokow isticmaalaya xisaab Samsung inay sameeyaan Samsung daruur gurmad, waxa kale oo aad isticmaali kartaa Gmail si gurmad Samsung xiriirada in Gmail .
Qaybta 2. Top 5 Android Apps in kaabta Samsung Galaxy S4 / S3 / S2 in Cloud
Taageerayaan Android OS
Helium App nidaameed oo kaabta 4.3 Free 5.4 Android 4.0 iyo ilaa
Kaabta Ultimate 4.3 Free 6.1m Android 2.2 iyo ilaa
Kaabta Titanium 4.7 Free 6.2 Android 1.5 iyo ilaa
My Pro kaabta 4.6 $3.99 3.5 Android 1.6 iyo ilaa
Kaabta Super 4.4 Free 1.5 Android 2.0.1 iyo ilaa
1. Helium App nidaameed oo kaabta
Waxaa aad u ogolaanaya in ay barnaamijyadooda gurmad, xogta, xiriirada, SMS iyo wac gal aad Samsung Galaxy S3 / S2 / S4 in hadhaysaa aan u baahnayn inay qalab xididka. Version premium Bixiyay bixisaa koombiyuutarka daruur of hayaan, gurmad jadwalka iyo xayeysiis lahayn. Waxay bixisaa xal gurmad u Android iyo codsiyada Android u hagaagsan ah. Muuqaal kale oo socodyada waa in Helium aad u saamaxaaya in ay barnaamijyadooda gurmad iyo xogta si ay kaarka SD ama kaydinta daruur. Wax macno ah ma lumin xogta oo la aad u hagaagsan karo xogta app ka qalab kale (qalabka Android) xataa haddii ay yihiin shabakadaha kala duwan.
Download Helium App nidaameed oo kaabta ka Google Play Store >>
2. Ultimate kaabta
Rummy Apps Ultimate Back kor u siinayaa app wejiyo ay taageerto kor u data codsiyada. Local iyo daruur u soo xulay shaqeynaya Box iyo DropBox. Waxaa sidoo kale waxa uu dhisay-in uninstaller iyo hawl dilaaga. Ultimate u ogolaanaya FUT app mobile si uu u doondoono ciyaartoyda. Intaas waxaa sii dheer, waxa kuu ogolaanayaa inaad si ay u sheeg dhaqaaqdo xirfad iyo ratings. Qaybta ugu fiican waa in ay tahay mid fudud, nadiif ah iyo alaabada. Xogta ciyaaryahan ayaa la soo bixi inay xog maxalli ah taas oo ka dhigaysa nidaamka xorta ah ee la xiriira internet.
Download Ultimate kaabta ka Google Play Store >>
3. Titanium xidid ★ ee kaabta
Waxaa la tilmaamay sida Ronie faras ka kalsoonaan karo ay taageerto kor u Samsung in hadhaysaa. Free version u ogolaanaya dib oo dib u soo celineysa barnaamijyadooda iyo xogta app sida xiriirada, SMS iyo abuse. Titanium ayaa bixiya dhammaan barnaamijyadooda la ilaaliyo iyo nidaamka Apps oo ay la socdaan macluumaadka dibadda kaarka SD ah. Waa fudud oo degdeg ah si fudud Dufcaddii 0-click iyo jadwalka hayaan. Chine No xiro halka gurmad ka shaqeeya. Apps si fudud loo dhaqaajin karin galay iyo kaarka SD ah. The cutub Pro muhiimka ah ilaa qaababka sida celiyo 0 click-Dufcaddii, app xogta multi-user oo u hagaagsan ama ka DropBox.
Download Titanium xidid ★ ee kaabta ka Google Play Store >>
4. Pro kaabta
Dhammaan xiriirada, music, videos, qoyska iyo macluumaadka kale ee loo baahan yahay albums taleefanka Samsung waxaa lagu xoojiyaa si daruurtii oo si fudud loo isticmaali karo. Laakiin ka dib markii qaar ka mid ah isticmaalka waxa ay ku guuldareysatay in ay soo celiso SMS iyo xiriirada. Shuqullada aan kaabta Pro on non-xidid Android iyo xidid qalabka Android. Waxaa la ciyaaray iyadoo gurmad Samsung in hadhaysaa kaydinta iyo in kaarka SD. Waxaa taageeray ilaa xogta ugu badan kooxaha kale ee Samsung. Waxay leedahay ansixinta ugu fiican rating ku saabsan qancinta macaamiisha. Xogta ma u baahan tahay in la soo celiyo si loo arko.
Download My Pro kaabta ka Google Play Store >>
5. Super kaabta: SMS & Xiriirada
Kaabta Super waa aalad si degdeg ah oo lacag la'aan ah dib loogu telefoonada Samsung. No daruur dib ilaa doorasho waa la heli karaa marka laga reebo afar mail G. Kaabta Super u ogolaanaya gurmad u SMS, abuse wac, Bookmarks, non-Google jadwalka taariikhda, xiriirada iyo barnaamijyadooda. Waxay leedahay barnaamijyadooda gurmad kaarka SD iyo sidoo kale tirtiri kartaa xogta gurmad kaarka SD. Added muuqaalada waxaa ka mid ah jadwalka hayaan si toos ah iyo Upload auto qorsheeyey files gurmad in Gmail. User ayaa bedeli kartaa folder gurmad in Settings iyo hubi gurmad la soo dhaafay count iyo waqtiga.
Download Super kaabta ka Google Play >>
A Full Pario sida loo isticmaalo Kies
Ku rakib, uninstall, Update Kies on Mac
Faylal ay ka dhaqaaq oo Samsung ay u iPhone
Content Nuqul ka Nokia in Samsung
Demi macruufka in Samsung Phone
Videos Transfer / Photos ka iPad in Samsung
Ceshano kaabta BlackBerry u Samsung Phone
> Resource > Android > kaabta Samsung in Cloud si aad Data Meel